यी महिलाले समुन्द्र भित्रै बच्चा जन्माएपछि तस्विर भाइरल बन्दै ! (हेर्नुहोस् तस्विरसहित) - pnpkhabar.com
You are at:Home»रोचक खबर»यी महिलाले समुन्द्र भित्रै बच्चा जन्माएपछि तस्विर भाइरल बन्दै ! (हेर्नुहोस् तस्विरसहित)
यी महिलाले समुन्द्र भित्रै बच्चा जन्माएपछि तस्विर भाइरल बन्दै ! (हेर्नुहोस् तस्विरसहित)
By रिता घिसिंग on १९ भाद्र २०७५, मंगलवार ०७:५८ रोचक खबर
एजेन्सी : एक बिबाहित महिलाको लागि आफ्नो सन्तान सुख प्राप्त गर्नुलाई धेरै सौभाग्यको रुपमा हेर्ने गरिन्छ। यहि सौभाग्य प्राप्त गर्ने क्रममा एक महिलाले भने समुन्द्रमा एक बालकलाई जन्म दिएकी छिन्। समुन्द्र भित्र नै एक महिलाले आफ्नो सन्तानलाई जन्म दिएको घटना संचार मध्यममा अहिले भाइरल नै बनेको छ। उनका केहि तस्विरहरु यदिबेला सामाजिक संजालमा भाइरल भैरहेका छन्।
यस घटनाको खुलासा एक हादिया होस्नी ई सैद नामक व्यक्तिले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा अपलोड गरेपछि भाइरल नै भएको हो। उनले पोस्टमा महिलाले समुन्द्रमा नै बच्चा जन्माएको कुरा उल्लेख गरेका छन्। उनले पोस्ट गरेको केहि बेरमा नै त्यस तस्विर भाइरल बनेको हो। तस्विरमा ती महिलाको सहयोग एक बृद्धले गरिरहेको देख्न सकिन्छ।
तस्विरमा ती बृद्धले एक नवजात शिशुलाई हातमा समाइरहेको देख्न सकिन्छ। ति बालकको आमा भने भर्खर पनि निस्किएको देख्न सकिन्छ। त्यस तस्विर देखेपछि धेरै व्यक्तिहरु अचम्मित रहने गरेका छन् भने अहिले मानिसहरु प्रश्न गरिरहेका छन् कि कसरि पनि भित्र बच्चाको जन्म हुन सक्छ ?